We Are Well Prepared For Coronavirus: Govt » 263Chat
By Fadzai Ndangana	 On Jan 28, 2020
Addressing journalists after touring the Robert Gabriel Mugabe International Airport yesterday Health Minister Dr Obadiah Moyo said he was happy with the surveillance process put in place by government.
“There are Zimbabweans who are also living in China and some who fly to China for business, we have heard one or two cases and we are currently monitoring them.We have to make sure that we have all the equipment necessary to detect any persons or visitors to make sure that they do not and so we are making sure that our airports are well covered and that our personnel are well-trained in the processes of checking on all those who are coming to Zimbabwe,” he said.
Dr Moyo confirmed that government has set up special surveillance at the main ports of entry including Robert Gabriel Mugabe International Airport, Joshua Nkomo International Airport and Victoria Falls Airport.
The Ministry of Health and Child Care has confirmed that Zimbabwe is under threat from the disease due to its close relations with China. Zimbabwe, however, does not have direct flights to and from China, which minimizes the risk.
ChinaCivil Aviation Authority of ZimbabweCorona VirusJoshua Nkomo International airportMinistry of Health and Child CareRobert Mugabe International AirportVictoria Falls International Airport
‘Incest, A Scourge In Our Midst’